२०७४ कार्तिक २५ शनिबार ०९:१७:००
डीभी–पीआरको विषयलाई अगाडि नबढाउन दबाब दिनेहरू पार्टीभित्र र बाहिरका थिए । कतिपयले मसँग ‘यसलाई अगाडि नबढाउनुस्, राम्रो हुँदैन’ भनेर चेतावनीको शैलीमा पनि कुरा गरे ।
“के गर्न लागेको हो ? यसले त धेरै अप्ठ्यारो पार्छ कि क्या हो ?” उहाँले भन्नुभयो ।
भेट्न खोज्ने मानिसलाई म प्रायः बिहान ७ बजेपछि बोलाउँथेँ । केही मानिस भने बिहान ५ बजे नै गेटमा आएर फोन गर्थे । भित्र बोलाउन बाध्य हुन्थेँ । एकदिन पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य वृन्दा पाण्डे मेरो क्वार्टरमा आउनुभयो ।
चिया खाँदै कुराकानी गर्न थाल्यौं । डीभी–पीआरको प्रसङ्ग उप्काउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो विषयले पार्टीको बदनाम हुने भयो । पार्टीको हितका लागि तपाईंले राजीनामा दिए राम्रो हुन्छ ।”
“पार्टीको हितमा छैन भने बर्खास्त गरोस् । मन्त्री पनि पार्टीले बनाएको हो । पार्टीको सदस्य नरहेपछि मन्त्री रहने कुरा भएन । यो कुरा केन्द्रीय कमिटीको छलफलपछि गरौं न त,” मैले भनेँ ।
त्यसपछि यो विषयमा उहाँले केही भन्नुभएन ।
“कसैलाई यो विषयमा छलफल गर्नु छ भने आउनुस्, म तयार छु,” मैले सार्वजनिक रूपमै चुनौती पनि दिएँ ।
नातेदार, चिनेजानेको मान्छे, विश्वास पात्रले गल्ती नै गरेको भए पनि आफ्नो मानिस नपरे हुन्थ्यो भन्ने सबैमा हुँदो रहेछ । तर, यस्ता विषयमा ध्यान दिइनँ । सुनेको नसुनेझैं गरेँ । कसैलाई लाग्यो होला– मेरो कुरा टेरेन, व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढ्यो । तर, मैले राष्ट्रको हित सोचेको थिएँ ।
डीभी–पीआर प्रसङ्ग उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि मलाई फिर्ता बोलाउन एमालेका नेताहरूसँग प्रस्ताव गर्नुभएछ । सरकारमा एमालेका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका गौतम तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतसँग उहाँले ‘लालबाबुलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुप¥यो, काम गर्न समस्या आयो, धेरै मानिस कुरा लिएर आए’ भन्नुभएछ ।
“राम्रो काम गर्नुभएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई किन निकाल्ने ? ल अप्ठ्यारो परेको हो भने मन्त्रालय फेरिदिऊँ न त,” अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भन्नुभएछ, “सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सारौं । अर्थमन्त्रीलाई सामान्य प्रशासनको जिम्मा दिऊँ ।”
पार्टीभित्र म सबैका लागि प्रिय थिइनँ । मेरो कामले चर्चा कमाएपछि मलाई मन नपराउने साथीहरू पार्टीभित्रै निस्किए । मैले परवाह गरिनँ ।
डीभी–पीआरको काम मैले पार्टीको योजनामा गरेको होइन । यो कामलाई बढाउँदै जाने सन्दर्भमा पार्टीका नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्दै गएँ । हाम्रो तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि मन्त्रीको विरोध भएन । मनमा शङ्का–उपशङ्का रहनु फरक कुरा हो । पार्टीभित्रको एउटा पङ्क्तिले पार लाग्ने विषय होइन भनेर आशङ्का व्यक्त गरेको थियो । तर, त्यस्तो आशङ्का किनारा लाग्दै गयो ।
डीभी–पीआरको विषय अगाडि बढाउने क्रममा स्थायी समिति सदस्यहरूलाई मैले भनेँ, “डीभी–पीआरबाट देशले ठूलो घाटा बेहोर्दै छ । कर्मचारीहरूको कामप्रति आत्मगौरव पनि छैन । काममा विश्वास पनि भएन । कर्मचारीहरूमा इमानदारी पनि देखिएन । समय दुरुपयोग भयो । राज्यले नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो ।”
“तपाईंले थाल्नुभएको काम ठीक छ । विचार पु¥याएर गर्नुस्,” उहाँहरूले भन्नुभयो ।
डीभी–पीआरको विषय केन्द्रीय कमिटीमा एजेन्डाका रूपमा कहिल्यै उठेन । नेताहरूलाई भने पटक–पटक प्रस्ट्याउनुप¥यो ।
एकदिन रेडियो कान्तिपुरमा डीभी–पीआरकै विषयलाई लिएर अन्तर्वार्ता थियो । त्यो अन्तर्वार्ता पार्टीका वरिष्ठ नेता खनालले पूरै सुन्नुभएछ । अन्तर्वार्ता सकिएको तीन मिनेटमै उहाँले फोन गर्नुभयो ।
“मैले तपाईंलाई अघि सार्दा नयाँ मान्छेलाई मन्त्री बनाए, के कसो होला भनेर प्रश्न उठेको थियो । तर, तपाईंलाई मन्त्री बनाएकोमा आज छाती गदगद भएको छ । म स्यालुट गर्छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
“म शपथ खाई विश्वास दिलाएर आएको छु । राष्ट्रिय हितका सवालमा एमालेको शिर निहुरिन दिन्नँ । तपाईं नेताहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिई काम गर्छु,” मैले भनँे ।
पार्टीका केही नेता राम्रो काम भएको भनेर भित्र–भित्र कुरा गर्थे तर बाहिर खुलेर बोल्दैनथे । आफ्नो पालामा भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने गर्थे । कतिपय विरोधी पार्टी र पूर्वसचिवहरूलाई पनि आफ्नो पालामा गर्दा नाम कमाइने लोभ थियो ।
मैले त गोरेटो बनाउने काम सुरु गरेको हुँ । यसलाई सदृढ र समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा ऐन–नियम संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया थालनी भएको हो । परिमार्जन गर्दै अघि बढ्न जो पनि सक्छ ।
(पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितको छिटै सार्वजनिक हुने ‘सिंहदरबार बदल्ने सङ्घर्ष’ नामक आत्मकथाबाट लिइएको अंश । यो पुस्तक ‘नेपालय’ले प्रकाशन गरेको हो ।)
हत्या टरेको दिन